भयबित डाक्टर र त्रासपूर्ण वातावरणमा बिरामी ! – जनस्वास्थ्य खबर
भयबित डाक्टर र त्रासपूर्ण वातावरणमा बिरामी !
शम्भु खनाल,१७ असोज।” डाक्टरकोमा जान डर लाग्ने भो । कहिले नक्कली डाक्टर । कहिले कहाँ अस्पातलअं मान्छे मरेछन् । अहिले आन्दोलन रे । मेरो पित्तथैलिको अपरेसन गर्ने भन्थे । अब डर लाग्यो । …….पैसा मात्र लिन्छन् । …। ” भन्दै एक खाइलाग्दो जिउडाल भएकी उमेरले सालाखाला ३० देखिने चाडपर्बका मौसमी वस्त्रले सुसाज्जित महिला आफ्नो साथीलाई सुनाउँदै थिइन् । केहि असन्तुस्टि, केहि रिस र केही भय उनको आवाजमा मिश्रित थियो । र केहि सत्य केहि भ्रम र केहि अज्ञानता थियो उनको बिचरामा र मनोबिज्ञानमा । बेलाबेलामा कुरामा पूर्णबिराम लगाइदिने कोहि भए हुने जस्तो लागेको थियो मलाई ।
किताबमा लेखिएको जस्तो बिरामी सधैं कहाँ हुन्छ र ! बिरामी कुनै बस्तु हैन । न त रोग त्यसको “फिचर । ” बिरामी त एउटा ब्यक्ती हो । जसलाई लक्ष्यणहरुको संग्रह अध्ययन गरी सबैभन्दा मिल्दो रोगको उपयुक्त उपचार गरिन्छ । चिकित्सा शास्त्र गणितीय फर्मुलामा चल्दैन । धेरै जसो रोगको सहि तरिकाले खोज्दा सहि निदान हुन्छ भने केही रोग मायाबी निस्कन्छन् । ति मायाबी रोगले चिकित्सकक्लाई पनि रणभुल्ल पार्छन् । बिरामीसँग रोग मात्रै नभएर उसको चेतना ,मनोबिज्ञान ,बिचार सबै साथमा हुन्छ । । चेतना भएकै हुनाले बिरामी बस्तु कदापि मान्न मिल्दैन । मानिस बिचारले बनेको हुन्छ । उसको बिचार र मनोबिज्ञानले डाक्टरलाई दानब देख्दछ भने विश्वाशको कमीले ताल्मेल मिल्दैन । दुई बिचको बिस्वासको तार कमजोर हुनु असफल उपचारको पहिलो नमिठो सुरुवात हो । बिडम्बना भन्नुपर्छ । त्यो बिस्वासको तार अहिले चुडिएको छ ।
हाल दुबै पक्षमा मनभित्रको भयको आयतन फराकिलो हुँदै गएको देखिन्छ । डाक्टरलाई बिरामी उपचार गरेर बिनाकारण कुटाइ खाइञ्छ कि भन्ने भय भने बिरामीलाई यो कतै नक्कली डाक्टर हो कि अथवा कतै उल्टोसुल्टो उपचार हुने हो कि भन्ने भय । एक अर्कासँग भयको बातावरणमा त दुबैजना उम्कने र जोगिने परिपाटी सिर्जना हुन्छ नै । उपचार गर्ने डाक्टर अरुको ज्यान बचाउने ध्यान भन्दा आफ्नै टाउको जोगाउने ध्याउन्नमा हुनु अस्वाभाबिक नहोला । त्यसैले मेरो अनुरोध ” हामीलाई डाक्टर नै रहने गरी विश्वाश गर्नुहोस् । हामीलाई वकिल नबनाउनुहोस् । ”
मानवीय त्रुटी सबैबाट हुन्छ । डाक्टर पनि एउटा चिकित्सासम्बन्धी केही ज्ञान लिएको मानव हो । तर त्रुटि न्यून भन्दा पनि न्युन हुन डाक्टर अत्यन्तै सम्बेदनशिल हुनु आवस्यक हुन्छ । किनकि डाक्टर एउटा रोगीको जीवन र उसँग जोडीएका जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ । गल्ति गर्नेलाई उन्मुक्ती हुनुहुँदैन । चाहे त्यो डाक्टर होस् वा बिरामीको मृत्युपस्चात हुल्दंगा गर्ने लाशका ठेकेदारहरु । एउटा कुराको अपरेसन गर्नुपर्नेमा अर्को अपेरासन गर्नेलाई कानुनले कस्नुपर्छ नै । तर सबै भबितब्यका घटनालाई अनुसन्धान बिना भीडको अवेसले लापरबाहीको संज्ञा दिएर लाशमाथि ब्यापार गर्ने हो भने बारम्बार घटिरहने कुट्पिट र हातपातका घटनाले असुरक्षित महसुस गरेर डाक्टरले बिरामीको रोगलाई सुरक्षाको तराजुमा तौलिन थाल्छ । बिरामीको सामाजिक आर्थिक मनोबैज्ञानिक सबै पाटोहरु ओझेलमा पर्दै जानेछन् । दया र करुणाले भन्दा रोगको प्रक्रिती हेरेर बिरामी हेर्ने र पन्छाउने बानी बिकास हुन्छ नै । त्यसैले मेरो अनुरोध ” हामीलाई सुरक्षित महसुस हुन दिनुहोस् । अनि मात्रै हामी तपाईंको रोगलाई र बिचारलाइ महसुस गर्न सक्छौँ । ”
फलानो रोगको बिरामी भर्ना भए यति दिन भर्नाको यतिउती पैसा भनेर बिरामीलाई मौद्रिकिकरण नगरिएको पनि हैन । त्यस्तो गरी नाफाघाटाको तराजुमा तौलेर इमान्दार ब्यापारिक सेवाको भावनालाई कुल्चिँदै बिरामीलाई केबल पैसाको रुपमा हेर्ने पनि छन् यहाँ । सेवा र सुबिधा अनुसार शुल्क हुनु बेठीक हैन । तर शुल्क र सेवामा फरक भएर निजी ब्यापारिक दृष्‍टिकोणका अस्पतालबाट धेरै बिरामी नठागिएका पनि हैनन् । तर पूर्वाधार , स्थान ,जनशक्ति र नियत केहि पनि अध्ययन नगरी कुना कुनामा पोल्य्क्लिनिक ,अस्पताल आदि खोल्न अनुमति दिने बढी दोषी हुन् कि आफ्नो ज्ञानलाई सदुपयोग गर्न खटिएको तलबी डाक्टर ? जसलाई केहि तलब दिएर नियुक्ति गरिएको हुन्छ । बास्तबिक संचालक सँग त बिरामीको भेट नै हुँदैन । कमसेकम यमर्जेन्सीमा भेटिने पहिलो डाक्टर भन्दा माथि धेरैले भेटेका हुदैनन् । खर्च भएको सबै पैसा डाक्टरले लग्यो भन्ने सोच पनि गलत हो । डाक्टरले प्राप्त गर्ने केहि मात्रै हो । त्यसैले मेरो अनुरोध ” आवेशमा डाक्टरमाथि हातपात नगर्नूहोस् । ऊ त एउटा अगाडि राखिएको सिपाही मात्र हो । ”
सबल उपकरण ,सबल पर्याप्त जनशक्ति खडा नगरिकन जबर्जस्ति सेवा दिनुपर्ने अवस्थामा डाक्टरको मात्र दोष देख्नु कत्तिको न्यायोचित होला ? बिरामीको पीडाको सबैलाई चिन्ता हुन्छ । तर सेवामा खटिएको डाक्टरले कस्तो अवस्थामा काम गरेको छ भन्ने कसैलाई चिन्ता हुँदैन। अचानाको पीर् खुकुरीले कसरि जानोस र ! बिरामीको चाप अनुसार जनशक्तिको ब्यबस्था गर्न नसक्ने सरकारले डाक्टरलाई मात्र कानुनमा कस्न खोजेको देख्दा सरकारको गृहकार्य नपुगेको प्रस्ट हुन्छ । सेवाबिस्तार सँगै पर्याप्त जनशक्ति नखटिँदा उपचारमा दुर्घटनाको सम्भावना बढ्छ नै । अब के त्यसको दोष पनि डाक्टरलाई नै दिने ? डाक्टरले आराम गर्ने मौका पाए कि पाएनन् । पारिश्रमिक उपयुक्त छ कि छैन । उपकरण कमसल र कमजोर भएर अप्ठेरो त छैन । यी कुराहरु नितान्त डाक्टरका मात्र चासोको बिशय सोचिन्छ । कसैको ध्यान पुग्दैन । सबैलाई डाक्टर भनेको सुविधाले भरिपूर्ण भएको पैसा कमाउन मात्रै बसेको जस्तो लाग्दो रहेछ । फुर्सदमा सबैले नेपालका डाक्टरको सुबिधाको अध्ययन गरे आफ्नो सोच र वास्तविकता उजागर होला ।
कार्यस्थलमा डाक्टरलाई बिरामी हेर्न राम्रो बिपी सेट पनि चाहिन्न ! तापक्रम नाप्न त हातैले छामेर भैहाल्यो ! ओटी लाइट नभए टुकीले नि अपरेसन चलिहाल्छ !! अपरेसन पछि पोस्ट अप वार्ड किन चाहियो र !! त्यसलाई रेखदेख गर्न नर्सिङ स्टाफ राख्न परेन ! ! यो सुन्दा बढी भने जस्तो लागे पनि दुर्गमको अस्पतालमा यस्ता अनेक समस्याहरु दिनहुँ झेल्नुपर्छ । अवस्था यस्तै नै हो । कसैले भन्ला कि ” डाक्टरले आफुलाई काम गर्ने बातावरण असजिलो र जोखिमपूर्ण भए किन आवाज उठाउनुहुन्न? “. मेरो कुरा बिस्वास गर्नुहोस् ” हामी काम गर्ने कारिन्दा हौँ । हामीसँग सोधिदैन । र हामीले भनेको पनि सुनुवाई हुँदैन । ”
मिडियाले जनमानसको बिचारलाई आकार दिने काम गर्दछ । संचारको प्रगति भए लगत्तै समाचार प्रेषण हुने असंख्य ईन्टरनेटका साइट र पत्रपत्रिकामा अधिकाम्श अध्ययन र अनुसन्धान बिना चिकित्सा सम्बन्धी घटनाहरु प्रकाशित गरेको पाइन्छ । । सामचारले अबचेतन मस्तिस्क त असर गर्छ नै । मेडिकल बिज्ञान सम्बन्धि ज्ञान नभएका व्यक्तिहरुमा भ्रम सजिलै फैलाउने काम पनि गरेको छ । जसले गर्दा डाक्टर र बिरामी बिचको सम्बन्धको दूरी बढ्दै गएको छ । त्यसैले सबै समाचार सत्य होलान् भनेर बिस्वास गर्नुपूर्ब बुझ्ने प्रयत्न गरौँ । नकारात्म्क सोच्न सजिलो हुन्छ । नकारात्मक सोचले आफ्नै बिचार प्रदुषित नगरौँ । केहि समय अगाडि नक्कली डाक्टर भनेर प्रपञ्च रचेर समातिएका डाक्टर पछि निर्दोश साबित हुनु नै एउटा यस राज्यमा भएको गैरजिम्मेवारीको नमुना हो । भ्रमपूर्ण समाचार छाप्दा दिर्घकालीन असर पर्ने हेक्का राखौँ । त्यसैले मेरो अनुरोध ” हाम्रो चिकित्सा क्षत्र मिडिया संक्रमित छ । जिम्मेवार संचार माध्य्म र आम नागरिकले सोचेर बुझेर प्रतिक्रिया दिने गर्नुपर्छ । ”
डाक्टरले बिरामीसँग सुधार्नुपर्ने मुख्य पाटो भनेको सम्बाद हो । बिरामीसँग कुरा नगर्दा बिरामीका आफन्ती अन्योलमा हुन्छन् । उनीहरुको मनमा संकाले ठाउँ लिन्छ । बोल्दा पैसा पर्ला जस्तो गर्ने डाक्टर पनि छन् । बिरामीलाई यथेस्ट समय दिएर कुरा गर्ने डाक्टर पनि छन् । बिरामीले आफ्नो उपचारको बारेमा जान्न पाउने हक छ । डाक्टरले उपचारको बिबिध पक्ष बिरामीलाई भन्नुपर्छ । सबै चिकित्सकहरुमा मेरो अनुरोध ” केहि समय खर्च गरौ बिरामीको संका उपसंका निबारण गर्नलाई । ” बिरामीसँग मेरो अनुरोध ” तपाईं सोध्नुहोस् । संका हटाउनुहोस् । हामि आफ्नो ज्ञानले सकेसम्म बुझाउने प्रयास गर्छौ । हामीलाई बिस्वास गर्नुहोस । हामीलाई सुरक्षीत महसुस हुन दिनुहोस् । ” गल्ति भए माफी माग्दै सबै सुखी रहून् भन्ने मेरो शुभकामना ।
स्रोत : शम्भु खनाल को ब्लग
Related Topics:भयबित डाक्टरभयबित बिरामी